Home Wararka Farmaajo oo diiday in u shacabka Soomaaliyeed uga warbixiyo shirkii Nairobi! Muxuu...
Farmaajo oo diiday in u shacabka Soomaaliyeed uga warbixiyo shirkii Nairobi! Muxuu qarinayaa?
Sida caadada u ah markii mas’uuliyiin Soomaaliyeed ay safar u baxaan ama ay ka qayb galaan kulamo xasuusi u ah qaranimada ummadda Soomaaliyeed, marka dalka aya ku soo laabtaan waxa ay sameeyn jireen shir jaraa’id kaas oo ay uga warbixinayaan safarkoodii iyo go’aanada ka soo baxay kulankii ay ka qayb galeen.
Hadadaba Madaxweyne Farmaajo oo asbuucaan horaantiiisii shir sadax geesood ah uga qayb galay magaalada Nairobi ayaa markii uu dalka ku soo laabtay waxa uu isku soo xiray hooyga uu ka dagan yahay xarunta Villa Soomaaliya. Ma jirto cid uu kala hadlay go’aanadii ka soo baxay shirkii Nairobi iyo halka uu ku danbeeysay dacwadii muranka ee u dhaxeeysay labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya.
Golihii Wasiiradda waxba lama socdaan halka baarlamaankii iyo gudiyadiisana ay ka amusan yihiin boobka hantida qaranka ee dalka Kenya iyo kaalinta uu ku leeyahay Farmaajo.
Aamusnaanta Farmaajo iyo ka qaranta uu shacabka ka qarinaayo go’aanidhii hoose ee lagu gaaray Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay cadeeyn u tahay in Farmaajo uu dalka Kenya la soo galay heshiis hoose oo laga qarinayo shacabka Soomaaliyeed.
Su’aashu waxa ay tahay waa maxay sababta uu ummadda Soomaaliyeed uga qarinaayo go’aanadii ka soo baxay shirkii Nairobi? Jawaabtu waa cadahay, waxa uu ka baqayaa in shacabka Soomaaliyeed kacdoon sameeyo. Dhanka kale Dowlada Itoobiya oo iyadu dhex dhexaadisay Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegtay in kulankii Nairobi looga hadlay Muranka Badda is fahamna laga gaaray? Farmaajo ilamaa ayuu ka qarin karaa shacabka Soomaaliyeed qayaanada uu ku sameeyay qaranimada Soomaaliyeed?